Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii wadatashiga hawlwadeenka JWXO Frankfurt, Germany oo ku soo gabagaboobay guul
Shirkii wadatashiga hawlwadeenka JWXO Frankfurt, Germany oo ku soo gabagaboobay guul
Posted by ONA Admin	/ April 26, 2011
Laga soo bilaabo habeenimadii khamiista 21ka April ahayd waxaa magaalada Frankfurt ee wadanka Germany ka socday shir wadatashi ah oo ay isugu yimaadeen xubnaha hawlwadeenka jwxo ee qaarada Europe shirkaas ayaa waxaa kasoo qaybgalay masuuliin fara badan oo isugu jira hawlwadeenka qaarada Europe iyo masuuliinta ugu saraysa JWXO oo uu hogaaminayo Gud. Admiral Maxamed Cumar Cusmaan,GXG Mudane Maxamed Ismaaciil Cumar. H ogaanka arrimaha dibada Mudane C/Raxmaan Sheekh Mahdi. Hogaanka Abbabulka iyo Arrimaha Bulshada Mudane.A Yaasin Diirane. Hogaanka arimaha ururka JWXO Mohamed Yuusuf iyo xubno galaha dhexe ee ka hoowlgala qaarada Europe.
Shirkan oo ahaa kii ugu horeeyay ee noociisa ah ayaa waxaa kasoo qayb galay wufuud ka kala timid dhamaanba qaarada yurub kuwaas oo madasha shirka lagaga dhagaysanayay warbxino kala duwan shirka ayaa la soo afjaray maalintii shalay ahayd 25ka bishan April.
Shirka oo aad u heer sareeyay ayaa lagu lafa guray dhamaan hagardaamooyinka lagu hayo halganka xaqa ah ee S. Ogaadeenya, iyo dhibaatooyinka kala duwan ee dal iyo dibadba looga geeysano shacabka maatada ah. Madax iyo hoowlwadeenba waxaa la isla meel dhigay istiraatiijiyadii lagu dar dar galin lahaa hoowlaha halkanka iyo sidii taliska gumeeysiga itoobiya looga soo xiri lahaa irdaha caalamka taas oo soo dadajisa dhicida taliska wayaanaha ah. Shirka ayaa wuxuu soo saaray war saxaafadeed ku saabsan go’aanadii kalfadhigan ka soo baxay halkaas oo aad kaga bogon doontaan go’aanada shirka.
GOGLO QORAHAY says:
waa muhiim in lawada tashado ilaahay kheryka hadin waa fajiyo guul iyo gobonimo viva onlf
dumane madaale danta guud says:
وامرهم شوري بينهم
waa saas wada tashigu waalagama maarmaan
guushuna waa gacanteena in shaa laah